Amakhandlela anamakha Abenzi & Abahlinzeki - China Iphunga lamakhandlela factory
Ingilazi yamatte ephrintiwe ilogo yesoyela amakhandlela anamakhandlela anesembozo soqalo
Usilika ephrintiwe ngokwezifiso ilogo
1. Lamakhandlela anamakha anemibala eminingana ehlukene, entekenteke. Ngamunye unephunga lakhe lokuphumula. Zijabulele nomuntu okhethekile.
2. Ukungabi nobuthi, ukuvutha okuhlanzekile, izintambo zikakotini eziyi-100%, ikhandlela lokuphromotha. Kumahhala ngentuthu, ikhabhoni ephansi
3. Izinto zesoya zemvelo, zikulethela iphunga lemvelo. Ukushisa okuhlanzekile nokwenziwe ngemvelo.
4. Amakhandlela ethu anamakhowe anuka kamnandi enziwa nge-100% ye-soya yemvelo Lead Free, Less Soot,. Awukho umsebenzi wokulwa nokulahlwa kwawo nawo wonke amakha ahlanganiswe ngokukhethekile ku-wax ye-soy ukuhogela iphunga eliphezulu.
Usayizi: D7cm * H9.3cm
Inkambo yensimbi yokuhamba ngokwezifiso amakhandlela anamakha
1. Lawa makhandlela ahlanganisiwe abekwe uphawu ngokubukeka okuhle, okukulungele ukuwathwala lapho uya khona!
2.Ukwakha imimoya ekhulisa imimoya nokuphumula kwakho nezivakashi, futhi kuyenza ibe yisipho esihle kunoma yisiphi isenzakalo!
3. Sicela unikeze izivakashi zakho, abangani noma umndeni ekhaya lakho ukwelapha izinzwa ngaleli khandlela lemvelo le-wax elinamakha!
4. Bayise ekhempini, ebhishi, uthole amapikiniki edina epaki futhi ujabulele isikhathi sakho sekhwalithi nemindeni nabangane!
Usayizi: 6.5 cm (Ububanzi) * 4.5 cm (Ukuphakama)
Ikhandlela le-Frosted glass soy wax elinamakha ngentambo kakotini
Ikhandlela lihlanganiswe kahle kahle ngokupha! Iphunga elihle kakhulu ngokwemvelo.
Leli khandlela lengilazi ngumkhiqizo wethu odumile, likhulu futhi lishisa kahle.
Uma ufuna ngokwezifiso logo yakho, wena nje ulithumele kithi futhi senza isampula ngawe.
Umbala: Mhlophe, Mnyama, luhlaza okwesibhakabhaka, noma imuphi umbala owuthandayo
Iphunga: I-Lavender, i-Rose, i-Strawberry, i-Ocean njll.
ikhandlela le-aromatherapy yangokwezifiso
Sizinikezele ekuletheni induduzo, isitayela nekhwalithi kumakhasimende ethu, ngeminyaka engu-20 yesipiliyoni. Amamodeli ahlonishwe isikhathi emhlabeni wonke akhuthaza abaklami bethu ukuthi benze amaqoqo ahlukile, amukelwa yilabo abafuna amanani.
Imodeli: C01M / C03M
Usayizi: 8.8cm (Ububanzi) * 8.8cm (Ukuphakama), 9cm (Ububanzi) * 11cm (Ukuphakama)